Lisitry ny mpivarotra MediaLight - Lighting Bias MediaLight
Lisitry ny mpivarotra MediaLight
Manolotra fandefasana eran'izao tontolo izao izahay, saingy matetika ianao dia afaka mitsitsy fotoana sy vola amin'ny alàlan'ny fampiasana mpivarotra eo an-toerana. Ny Medialight dia amidin'ny tamba-jotra mpivarotra kely nefa manana fahalalana manerantany.
Sary sy horonan-tsary B&H
MediaLight China (tanteraka tamin'ny alàlan'ity tranonkala ity)
Voafetra ny famatsiana eto Chine aminay. Nandefa ny zava-drehetra tamin'ny mpivarotra iraisam-pirenena anay talohan'ny taom-baovao sinoa. Manantena izahay fa hanana ny zava-drehetra ao Shina amin'ny faran'ny volana aprily.